Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफा ९६.०९% ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ९६.०९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...
डिप्रोक्स लघुवित्तका नवनियुक्त अध्यक्ष खनालद्वारा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक खनालले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष खनालले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन्। संस्थाको गत चैत २० गते सम्पन्न १९ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट खनाल लुम्बिनी...
डिप्रोक्स लघुवित्तको एजीएबाट २०% लाभांश अनुमोदन, अध्यक्षमा दिपक खनाल सर्वसम्मत
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको २० प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्दे डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १९ औँ वार्षिक साधराणसभा आज शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। चितवनको सौरास्थित होटेल मोनासिलामा सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश अनुमोदन गरेको छ। बोनस सेयर जारीपछि संस्थाको...
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आज चैत २० गते हुने १९ औँ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल २० प्रतिशत लाभांश पारित गर्दैछ। संस्थाको वार्षिक साधारणसभा चितवनको सौराहास्थित होटेल मोनासिलामा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत...
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आउँदो चैत २० गते वार्षिक साधारणसभा डाकेको हो। सभा चितवनको सौराहास्थित होटेल मोनालिसामा हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरको कुल २०...
राष्ट्र बैंकद्वारा डिप्रोक्स लघुवित्तद्वारा प्रस्तावित २०% लाभांश स्वीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडद्वारा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न प्रस्ताव गरिएको लाभांश स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो बिहीबार डिप्रोक्स लघुवित्तलाई पत्र पठाउँदै लाभांश स्वीकृति भएको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुमति...
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजी १ अर्ब ५४ लाख ३३ हजार ५७४.५१ रुपैयाँको कुल २० प्रतिशतले हुन आउने २० करोड १० लाख ८६ हजार ७१४.९० रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको �...
डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफा ३१.२२%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको नाफा गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा ३१.२२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष संस्थाले २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा...
डिप्रोक्स लघुवित्तको नगद लाभांश नलिएको कति वर्ष भयो ? संस्थाले भुक्तानी गर्दैछ
काठमाण्डौ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएका नगद लाभांश हालसम्म नलिएका सेयरधनीहरुलाई भुक्तानी लिन आउन आग्रह गरेको छ। संस्थाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै हालसम्म बुझिलिन बाँकी नगद लाभांश लिन आउन सेयरधनीहरुलाई आग्रह गरेको हो। त्यस्ता सेयरधनीहरुले आफ्नो सेयर प्रमाणपत्रका साथ आफ्नो...
डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफा १०६.६०%ले बढ्यो, सञ्चालन घाटा रु. १.१० अर्ब
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको तुलनामा १०६.६० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...